Ngaba unesikhumba seoli?
Ikhumba elinamafutha linengxaki kubaninzi, amantombazana namakhwenkwe. Ngelishwa, iimpawu zokuba unesikhumba somnxeba: ukhanyisa kwi-T-zone, kwi-chin, naku-acne. Iingqungquthela ezixhambileyo, abanini-mafutha bayabhanya ebusweni, basebenze ngokugqithiseleyo, ngenxa yokucinywa kwama-pores kunye nokwakhiwa kwezibhokhwe. Ngokuqinisekileyo, umntu unokuthemba ukuba konke oku kuthulisa okuzolileyo kuya kugqitywa ngokukhula komzimba. Kodwa, akunjalo. Ngoko ke, kucetyiswa ukuba kwenziwe unyango lwesikhumba kunye nokuthintela.
Ukuba awukwazi ukuba luhlobo luni lolusu, unako ukuqhuba uvavanyo olulula. Coca ubuso bakho, uze uncike ebunzini lakho, umzekelo, malunga nesibuko. Ukuba ngokukhawuleza kukho isicatshulwa seoli esiqhelweyo kwisibuko, ngoko ungatsho ngokukhuselekileyo ukuba unesikhumba seoli. Ndiza kukukhawuleza ukuba uzonciphise umncinci: nangona unobangela wokuba uhlaselwe yintsimbi kwaye ungayazi ukuba ususe njani ukukhanya kwamehlo ebusweni bakho, kule meko kukho i-pluses. Isikhumba se-oily silahlekelwa ngumswakama ngaphantsi kwesikhumba esiqhelekileyo okanye some. Kwaye oku kuthetha ukuba isikhumba seoli sisoloko sinyanzelisiwe kwaye imibimbi kuyo iya kubonakala kamva kamva. Njengoko sele sele khankanywe ngasentla, izilonda ezinxilisayo zisebenza kolukhuni kanzima, zivelisa inani leenqatha ezikhusela ulusu kwimiphumo emibi yendalo.
Kodwa, nangona kunjalo, yonke intombazana iphupha ibe yinto enhle kakhulu. Kwaye intombazana enhle kakhulu kufuneka ibe nekhanda eligqibeleleyo, ngoko makhe sizame ukucinga indlela yokususa ngayo i-fat sheen ebusweni. Isikhumba esinamafutha kufuneka sihlambuluke ngokucokisekileyo kwaye le nkqubo ayifanelekanga isepha. Zonke izixhobo ozakuzisebenzisa ukucoca ulusu kufuneka zizithambile kwaye zingaphathi pH.
Akunjalo nakweyiphi na imeko, ungayeki ukondla isikhumba sakho. Emva koko, isikhumba somzimba sidinga inani elaneleyo lezondlo. Kwii-pharmacy kunye neevenkile zobuhle, kukho ukhetho oluninzi lwe-moisturizers kwesikhumba seoli. Amantombazana, ngokubaluleke kakhulu, nawaphi na umzekelo musa ukuthatha intloko ukuba "ukucima" izibonda kunye namachashaza amnyama! Uza kuphucula nje imeko yesikhumba, ngoko ke kuyo yonke into iya kuba nobunzima, apho kuya kuba nzima ukunqumla khona, kunokuba kubonakale kunamafutha ekukhanyeni.
Kufuneka uthande isikhumba sakho, siwaxabise kwaye usixabise, nangona i-iridal kwaye ibangela iingxaki ezininzi. Kabini ngosuku, ngokuhlamba, sebenzisa i-gel ekhethekileyo. Ukuze kuphuculwe umphumo, sebenzisa ibrashi elithambileyo. Ngaloo ndlela, unako ukuhlambulula ii-pores ukukhutshwa.
Emva kokuhlamba, sebenzisa i-lotion ebusweni nge-cotton swab equkethe i-acetylsalicylic acid. Ndiyabulela kule nkqubo elula, iifolo ziya kuhlambuluka, i-fat glitter ebusweni iya kubonakala. Kwakhona uwasusa ebusweni iincinci ezinobumba. Kwaye, musa nje ukulibala - ukunyusa isikhumba!
Kukho i-arsenal epheleleyo yokupheka kweemaski, eziza kunceda ukulahla i-fatty shine phezu kobuso.
1. Ukuze umise isikhumba, sebenzisa i-kefir kuyo nge-cotton swab. Yishiye imizuzu eyi-15. Emva kokuba ixesha lidlulileyo, hlamba umququ ngamanzi afudumele.
2. Ukunciphisa ama-pores nokuphucula umbala, whisk iprotheni ene-lemon zest. Faka isicelo umxube kumntu ococekileyo imizuzu eyi-15. Emva koko susela ngamanzi afudumeleyo.
3. Ukuhlambulula isikhumba: i-whip 1 tsp. ijusi lemon kunye ne-20 g yemvubelo. Emva koko bongeza ubisi olunotshisayo. Faka isicelo kwisikhumba imizuzu elishumi elinesihlanu. Hlanganisa ngamanzi afudumele.
Yaye, kungakhathaliseki ukuba yeyiphi iresiphi oyikhethayo kunyango lwamafutha. Njalo khumbula ukuba naluphi na ulusu ludinga ukunakekelwa nokuqwalaselwa. Ndaphinda ndiphinde ndiphindule ukuba isikhumba samathambo sifuna ukuphucula.
Zithande, zivuyise kwaye zikholise abanye ngokuzungezile ngobuhle bakho kunye nokungabikho kwamanqatha ebusweni bakho.
Isikhumba ekunyamekeleni kwesikhumba somzimba kunye nobuso
Ukuguquka kwesikhumba ehlobene nobudala
Ukuphatha i-milkwort kunye nomthi weeyi
Umnqweno woNyaka omtsha: i-design ye-nails yohlobo olutsha lweNew Year 2016
Yintoni ofuna ukuyazi malunga nokulala?
Iipropati zamafutha ahlukeneyo
Isifo seGout: iimpawu, ngokuqinisekileyo, unyango
Indlela yokukhetha isipho kumntwana osemtsha
Indlela yokugqoka amakhonkco ezandleni zakho ifaneka kwaye ifane
Iinkqubo zonyango lokuphuhliswa kwezilwanyana
NJENGOBA I-FEI, okanye i-Beauty-reception evela kwi-brand KRACIE yaseJapan
Ingubo yeHalloween yamantombazana kunye namantombazana ngezandla zabo - Indlela yokwenza uMongikazi, abaNtshontsho, oogqirha, abafazi-ikati ekhaya